02 / 06 / 2019 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Juun 2, 2019
Antalya Kayseri Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Warbixinta EIA ayaa la aqbalay
Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Antalya Kayseri: Saamaynta ugu dambeysa ee deegaanka ee loo diyaariyay mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Kayseri-Nevsehir-Aksaray-Konya-Antalya oo ay qorsheysay Agaasinka Guud ee Tareenka Waddooyinka (TCDD). [More ...]
Isbeddelka safka iyo isbeddelka ayaa lagu sameeyey duulimaadyada HAVAIST
Basaska IETT ee ku xiraya garoonka diyaaradaha magaalada Istanbul iyo duullimaadyada HAVAIST waxay beddeleen wadooyin iyo jidad. Duulimaadyada qaar baa la joojiyay. BEDDELKA GÜZERGAHLAR H-2 Mecidiyeköy - Baska Diyaaradaha IETT ee Istanbul: [More ...]
1. Gaadiidka Dadban
Duqa degmada Samsun Mustafa Demir ayaa booqday 1. Maalmaha baska iyo taraamulka ayaa lagu soo dallacayaa. Guddoomiyaha Degmada Samsun Mustafa Demir ayaa ku sheegay hadal uu ka soo saaray mawduucan: lamaane Samsunlular. [More ...]
Konya Adana Tareenka iyo Tilmaamaha 2019
Jadwalka Tareenka Konya Adana iyo Qiimaha Tigidhada 2019: Adana Wakhti intee le'eg ayaa jadwalka tababarka ee Konya? Waqtigee tareenku ka socdaa Adana ilaa Konya? Immisa waa tikidhada tareenka? Waa maxay waqtiga tareenka iyo qiimayaasha [More ...]
ARUS wuxuu noqonayaa Codka Suuqa ee Eurasia Rail Fair 2019 Fair Fair
Turkiga oo kaliya iyo 3 ee dunida ugu weyn. Eurasia Railway 8. XiiX-10 April waxaa lagu qabtay magaalada Izmir. Soo bandhigida tiknoolojiyada ugu dambeeyay ee lagu isticmaalo qaybta tareenka aduunka, [More ...]
Wareegga Heerka Koornada Kanuni Bulvarı
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan, "Trabzon's ee magaalada, isku xirka iyo taraafikada caalamiga ah ee u adeegaya wadada xeebta taasoo fududeyn doonta culeyska masraxa Kanuni Boulevard ayaa bilaabmay." Wasiirka [More ...]
5 waxay isticmaashay in ka badan hal milyan oo rakaab ah oo ku yaal Garoonka diyaaradaha ee Istanbul bishii Maajo
Howlwadeenka Madaarka Istanbul ee IGA ayaa ku dhawaaqay warbixintii rakaabkii rakaabka iyo duulista bishii lasoo dhaafay akoonkiisa rasmiga ah ee Twitter. Sida lagu sheegay warbixinta, imaatinka 17 kun ee 814 iyo 17 kun 882 ayaa bishii hore ka dhoofay garoonka diyaaradaha [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha ee Waqtiga Lahaanshaha In Karaman Bilaash ah
Dowlada hoose ee Karaman waxay qaadatay dhamaan talaabooyinka lagama maarmaanka u ah muwaadiniinteenna si ay ugu qaataan Ramadaanka Ramadaan si nabad ah. Kooxaha dawladda hoose ayaa mas'uul ka noqon doona ilaalinta 24. Dawlada Hoose ee Karaman, oo soo diyaarisay diyaar garowgeeda awgeed maalmaha Ramadaanka. [More ...]
Gaadiidka dadweynaha oo bilaash ah oo ku yaalla magalada Sanliurfa
Dowlada Hoose ee Magaalada Sanliurfa, dadka Sanliurfa si ay ugu qaataan Ciidda Ramadaanka si talaabo raaxo leh oo nabdoon ayaa looga qaadaa magaalada oo dhan. Maalinta 3 ee ciidaha waa u lacag la’aan muwaadiniinta si ay u sameeyaan booqashooyinkooda kuwo raaxo leh [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha ee Diyarbakir
Degmada Diyarbakır waxay leedahay adeegyo gaadiid dadweyne oo bilaash ah inta lagu gudajiro maalinta 4 oo ka bilaabmeysa habeenka ciida iyadoo ay ugu wacan tahay Ramadaanka Ramadaan. Maalintii koowaad ee ciida iyo curadka iidaha, muwaadiniinta bartamaha magaalada [More ...]
Maalinta Koowaad ee bisha Ramadaan ee Erzurum Free
Alann gaadiid bilaash ah, oo caado ka noqotay Erzurum, ayaa qayb muhim ah ka noqon doona ciidaan. Maalintii ugu horreysay ee xafladda, basaska degmada, basaska gaarka loo leeyahay iyo khadka waxaa amray Mehmet Sekmen, Duqa Magaalada Erzurum Dawlada Hoose. [More ...]
Helitaanka Easy Access to Mashruuca Gaadiidka EGO
Dawlada Hoose ee Magaalada Ankara, oo qaaday dhamaan talaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo hubiyo in dadka ku nool caasimada ay ku qaadan karaan Ciidda Ramadaanka si nabad ah oo nabad ah, waxay sii wadaysaa inay si joogto ah ula shaqeyso cutubyo badan sida EGO, ASKİ iyo Blue Table. [More ...]
Adeegga bilaashka ah ee Adeegga Bilaashka ah ee booqashada Manisa
Dowladda Hoose ee Magaalada Manisa waxay adeeg lacag la’aan ah kabixin doonta Qabuuraha Kırtık si ay ugu suurtagasho muwaadiniinta Manisa inay soo booqdaan xabaalaha iyaga oo aan wax dhibaato ah qabin inta lagu gudajiro bisha Ramadaan. Laga bilaabo bilowga istaagida waxaa lagu go'aamiyaa baaxadda codsiga, safarka wareega, inta u dhexeysa saacadaha 09.00-19.00 [More ...]
Gaadiidka iyo Baardheere oo lacag la'aan ah Kocaeli oo ku yaala Ramadaan
Dawladda Hoose ee Kobanheegan, inta lagu jiro bisha Ramadaan ee muwaadiniinta inay awoodaan inay la kulmaan asxaabta iyo qaraabada si ay u bixiyaan adeegyo bilaash ah sannad kasta. Xaaladdan dhexdeeda, golaha magaalada ee magaalada Kacaani [More ...]